Qaar ka mid ah Odayaal dhaqameedyo oo isaga baxay xaruntii shirka Odayaasha Dhaqanka uga socda Magaalada Muqdisho
Waxaa maanta Xaruntii shirka uga socday Odayaasha dhaqanka isaga baxay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyo ka qayb galayay shirka ka socda Muqdisho ayaa isaga baxay shirkaas, kaddib markii ay sheegeen inaan tallo looga baahnayn.
Odayaasha isaga baxay shirka ayaa sheegay uinaysan iyagu awood u lahayn inay ay wax ka sixi karaan shirka, sidaas darteedna ay go'aansadeen inay isaga baxaan Shirka xaruntii uu ka socday.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ahaa odayaasha shirka ka baxay maanta ayaa sheegay in muddo laba bilood ah uu shirkoodu socday, lana qaadan waayay talooyin ay soo jeediyeen, wuxuuna sheegay inay shirka ka baxeen.
Maxamed Xasan Xaad ayaa in sababaha uu shirka uga baxay ay tahay in dastuurka ay ku arkeen khaladaad aysan sixi karin iyaga, "Waxaa nala yiri idinka wax ma sixin kartiin, taasi waxay keentay inaan sameyno guddi 15 xubnood ka kooban, kuwaasoo soo diyaariyay qodobbada khaladaadka ah ee ku jira dastuurka oo aan lagu aamini karin aayaha ummadda Soomaaliyeed, markii aan niri dastuurka waa in la saxaana waa nalaga diiday" ayuu yiri nabadoonka oo sheegay inuu markaasi go'aansaday inuu shirka isaga baxo.
Nabaddoonku wuxuu sheegay in odayaasha laga doonayay oo keliya in laga qaato sawiradooda, balse aan laga doonayn wax tallo iyo tusaale ah, taasina ay keentay inay shirka isaga soo baxaan.
Guddoomiyaha odayaasha dhaqanka Muqdisho Maxamed Xasan Xaad oo ah ayaa sheegay in shirka ay ka baxeen odayaashii isaga taabacsanaa oo dhan, balse ma sheegin inay shirka ku laabanayaan haddii khaladaadka ay tabanayaan la ansixiyo iyo in kale.
Dhanka kale odayaasha dhaqanka ee shirka ka baxay waxaa ka mid ah Xasan Cilmi Yaxye oo isaguna ka mid ahaa odayaashii shirka ka baxay maanta ayaa sheegay in sababta ay uga baxeen ay tahay iyagoo arkay in dastuurka loo soo gudbiyay aan loogu talogelin in wax laga saxo.